The Flowers of War (2011) | MM Movie Store
1930 ပတျဝနျးကငျြလောကျက နနျကငျးမွို့တျောမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ တရုတျ_ဂပြနျစဈပှဲအကွောငျးကိုအခွခေံရိုကျကူးထားတဲ့ Drama ဆနျဆနျ စဈကားပါ…Batman မငျးသား Christian Bale ပါဝငျထားပွီး လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ဇာတျကားတဈကားပါ…
စဈရဲ့သားကောငျတှဖွေဈကွတော့မယျ့ ကြောငျးသူတဈစု ၊ ငှလေိုခငျြလို့လာခဲ့ပမေယျ့ငှထေကျအရေးကွီးတာတှကေို သိမွငျသှားတဲ့ အနောကျတိုငျးသား သုဘရာဇာတဈဦး ၊အလုပျကနိမျ့ကပြမေယျ့ ပငျကိုယျစိတျထားမနိမျ့ကတြဲ့ အပြျောမယျတဈစု စတဲ့ဇာတျကောငျတှနေဲ့အနုပညာရသတှကေို အကောငျးဆုံးပုံဖျောထားတဲ့ ဇာတျကားတဈကားပါ….
1930 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်က နန်ကင်းမြို့တော်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တရုတ်_ဂျပန်စစ်ပွဲအကြောင်းကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ Drama ဆန်ဆန် စစ်ကားပါ…Batman မင်းသား Christian Bale ပါဝင်ထားပြီး လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ…
စစ်ရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်ကြတော့မယ့် ကျောင်းသူတစ်စု ၊ ငွေလိုချင်လို့လာခဲ့ပေမယ့်ငွေထက်အရေးကြီးတာတွေကို သိမြင်သွားတဲ့ အနောက်တိုင်းသား သုဘရာဇာတစ်ဦး ၊အလုပ်ကနိမ့်ကျပေမယ့် ပင်ကိုယ်စိတ်ထားမနိမ့်ကျတဲ့ အပျော်မယ်တစ်စု စတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့အနုပညာရသတွေကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ….
Hotel Desire – Link 3